Ezakamuva ngegciwane iCorona - Tshepo.Mobi
Ezakamuva ngegciwane iCorona
Ulwazi olusemqoka ngegciwane leCorona
Igcine ukuvuselelwa: 30 Mbasa 2020
UMzansi Afrika usengaphansi kwe #lockdown ukuze silwe nokubhebhetheka kwegciwane leCorona - lokhu kusho ukuthi wonke umuntu kumele ahlale ekhaya kuze kube nesinye isimemezelo.
Akushukuthi uyoze uhambele ngaphesheya kwezilwandle ukuze usuleleke ngegciwane - likhona nalapha eMzansi Afrika - kanti nabantu abasha bangaba nalo futhi bagule kakhulu.
Izimpawu ezijwayelekile ilezi:
Ukuphefumula kanzima noma uphelelwe umoya
Kubantu abane kwabayisihlanu kungaba nezimpawu ezingabaqinisi futhi bangahlala ekhaya baze babengcono ngaphandle kokuthola ukunakekelwa kwasemtholampilo. Uma ucabanga ukuthi sewunalo leligciwane, shayela lenombolo ephuthumayo: 0800 029 999. Ungalibhebhethekisa igciwane noma ungaguli. Yingakho ilockdown ibaluleke kakhulu.
Ungahlala kanjani uphephile?
Kubaluleke kakhulu ukuthi uhlale ekhaya. Ungaphuma endlini kuphela uma uyothenga ukudla, imithi/amakhambi, uma uyolanda imali yesibonelelo sikahulumeni noma uyobona udokotela. Amatekisi azobakhona phakathi kuka 5 no 10 ekuseni, naphakathi kuka 4 no 8 ntambama ukuze ukwazi ukwenza konke lokhu esesikubalile. Ukuhlala ekhaya kuzokwenza igciwane lingasabalali.
Geza izandla zakho kaningana ngosuku
Sebenzisa insipho namanzi ahambayo. Uma engekho amanzi ahambayo sebenzisa isitsha samanzi esincane esinensipho noma ucele ilunga lomndeni likuthele ngenkomishi yamanzi ezandleni. Geza izandla imizuzwana engamashumi amabili. Uma uhlala endaweni engenamanzi shayela ucingo kulenombolo 0800 200 200 - uhulumeni usebenza ngamandla ukuletha amanzi kulezizindawo.
Gcina ibanga elingamamitha awu 1,5 nabanye abantu
Uma ungaphandle kwekhaya gcina ibanga elingamamitha awu 1,5 nabanye abantu futhi ningaxhawulani. Igciwane lihamba ngamathe ngakhoke uma umele ekudeni ngokwanele amathuba mancane okuthi ungagula noma ngabe uhlangene nomuntu ogulayo. Khumbula ukuthi uma uthimula noma ukhwehlela sebenzisa indololwane ngokuyigoqa!
Zigcine unolwazi futhi uqaphele
Thatha izifundo kwingosi yeFUNZI ukuze uthuthukise ulwazi lakho nge COVID-19 (loluhlelo lusebenzisa idata encane kakhulu) noma uvakashele umnyango kahulumeni wezempilo engadingi ma-data. Ukuze mangabe abanye bekutshela ngaleligciwane ukwazi ukuzibhekela ukuthi bakunika ulwazi oluqinisekiwe.
Khuthaza nabanye abantu ukuba bahlale emakhaya
Yiba ushampeni/iqhawe loshintsho emphakathini wakho futhi ukhuthaze abanye abantu ukuthi abalithathele phezulu leligciwane ngokuhlala ekhaya. Qhudelana nomngani wakho ngokuthi aphephe, ahlakaniphe futhi abemnene ngokungenelela kumqhudelwano weWhatsapp Lockdown Challenge (kungabiza amanani ajwayelekile eWhatsapp).
Siyakukhuthaza ukuthi ulokhubuya njalo kulengosi yethu ukuze uthole ulwazi olusha kuleli khasi.